पंजशीर तालिबानको नियन्त्रमा, के छ पछिल्लो अवस्था ? — Imandarmedia.com
पंजशीर तालिबानको नियन्त्रमा, के छ पछिल्लो अवस्था ?
एजेन्सी। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा नियन्त्रण गरेको करिब २० दिनपछि र देशमा आफ्नो सरकार गठनभन्दा केही समयअघि तालिबानले पंजशीर घाटीमा पनि आफ्नो नियन्त्रण भएको बताएको छ । तर, पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहले भने यो दावी अस्वीकार गरेका छन् र लडाइँ अहिले पनि जारी रहेको बताएका छन् ।
पछिल्ला केही दिनयता अहमद मसुद र अमरुल्लाह सालेहको नेतृत्वमा पंजशीरमा तालिबानविरुद्ध लडाइँ भइरहेको छ । केही दिनअघि नर्दर्न एलायन्स र तालिबानबीच वार्ता भएको थियो तर वार्ता विफल भएको छ । त्यसपछि तालिबानले पंजशीरमा नियन्त्रण गर्नको लागि आफ्ना लडाकू पठाएको थियो ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग कुरा गर्दै तालिबानका तीन सूत्रले पंजशीरमा आफ्नो नियन्त्रण भएको बताएको हो । सूत्रले अब तालिबानको पंजशीरसहित पूरै अफगानिस्तानमा नियन्त्रण भएको बताएको हो । पंजशीरमा नियन्त्रण भएपछि तालिबानी लडाकुहरुले राजधानी काबुलमा खुसी मनाउँदै हवाइ फायरिङ गरेका थिए ।
अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति तथा स्वघोषित संरक्षक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहले भने तालिबानको दावीको खण्डन गरेका छन् । उनले ट्वीट गर्दै लडाइँ अझै जारी रहेको र जारी रहने बताएका छन् । उनले आफू आफ्नो माटोको साथमा रहेको र यसको गरिमाको रक्षा गरिरहेको बताएका छन् ।
एक तालिबानी कमाण्डरले भने ‘हल्लाहको कृपाले पूरै अफगानिस्तान हामे नियन्त्रणमा छ । समस्या पार्नेहरुलाई हामीले हराएका छौं र पंजशीर अब हामे नियन्त्रणमा छ ।’ यद्यपि पंजशीरमा तालिबानको नियन्त्रणको आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन । यसअघि पनि तालिकानी लडाकुले यस्ता दावी गर्दै आएका छन् जसलाई अमरुल्लाह सालेहले अस्वीकार गरेका छन् ।
यही बीच अमरुल्लाह सालेहले पंजशीरमा तालिबानको नियन्त्रणको रिपोर्टलाई आधारहीन बताउँदै आफू देश छाडेर नभागेको बताएका छन् । सालेहले इण्डिया टुडेसँग टेलिफोनमार्फत कुरा गर्दै आफू पंजशीरमै रहेको र आफ्ना कमाण्डर तथा राजनीतिक नेताहरुसँग स्थितिको व्यवस्थापन गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले भने ‘केही रिपोर्टहरुमा म देश छोडेर भागेको भनिएको छ यो पूरै निराधार हो । यो मेरो आवाज हो, म पंजशीर घाटीबाट, आफ्नो बेसबाट कुरा गरिरहेको छु । यो एक कठिन स्थिति हो । हामी तालिबानी, पाकिस्तानी, अल कायदा र अन्य आतंकवादी समूहको आक्रमणको खतरामा छौं ।
यसै गरि , तालिबान समूहले अफगानिस्तानको एउटा सहरमा एक जना महिला प्रहरीको गोली हानेर हत्या गरेको प्रत्यक्षदर्शी बीबीसीलाई बताएका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बानू नेगर नाम गरेकी ती महिला प्रहरीलाई घोर जिल्लाको फिरोजकोह सहरमा आफ्नै घरमा परिवार कै अघि मारिएको थियो।
अफगानिस्तानमा महिलाहरू विरुद्ध बढ्दो हिंसाका घटनाका खबरबीच पछिल्लो हत्या सार्वजनिक भएको छ।तालिबानले भने उक्त घटनामा आफूहरूको संलग्नता नरहेको बीबीसीलाई बताउँदै आफूहरूले घटनाको छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।
प्रक्ताव जबिहुल्लाफेसबुककाह मुजाहिदले भने: ”यो घटना हामीले थाहा पाएका छौँ र म यो पुष्टि गर्छु कि तालिबानले उनलाई मारेको होइन, हाम्रो छानबिन जारी छ।”तालिबानले यस अघि नै पूर्ववत् सरकारसँग काम गरेका मानिसहरूलाई आम माफी दिइसकेको उनले थपे र नेगरको मृत्युको कारण ”व्यक्तिगत दुस्मनी वा अन्य केही हुनसक्ने” बताए।
घटनाबारे बोले बदला लिन सक्ने डरका कारण स्थानीय बासिन्दाहरू मौन छन्। त्यसले गर्दा घटनाको विस्तृत विवरण अझै अस्पष्ट छ। परिवार सदस्यहरूका अनुसार स्थानीय बन्दीगृहमा कार्यरत नेगर गर्भवती थिइन्। उनको कोखमा आठ महिनाको बच्चा थियो। शनिवार उनको घरमा तीन जना बन्दुकधारी आएको र परिवारका सदस्यहरूलाई बाँधेर राख्नु अघि घरमा खानतलासी गरेको आफन्तहरू बताउँछन्।
ती बन्दुकधारीहरूले अरबी भाषामा बोलेको सुनिएको एक जना प्रत्यक्षदर्शी बताए। ‘तालिबान घर आइपुगे मैले आत्महत्या गर्नुपर्ने हुनसक्छ’गत अगस्ट १५ तारिखमा काबुल सहित अफगानिस्तानको अधिकांश भाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै तालिबानले आफूलाई विगत भन्दा बढी सहिष्णु समूहका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको छ।
त्यो उसका विश्वव्यापी परिचय भन्दा फरक हो। तर अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानहरूमा अझै क्रूरता र दमनका घटनाहरू भएको सार्वजनिक भइरहेका छन्।